Antonio Cassano oo sheegay kooxda uu u arko inay tahay tan ugu fiican adduunka & hal arrin uu ka qoomameynayo – Gool FM
Antonio Cassano oo sheegay kooxda uu u arko inay tahay tan ugu fiican adduunka & hal arrin uu ka qoomameynayo
(Yurub) 26 Mar 2020. Weeraryahankii hore xulka qaranka Talyaaniga ee Antonio Cassano ayaa qiray sababtii uu kaga tagay kooxda reer Spain ee Real Madrid ay aheyd dabeecad xumidiisa, maadaama uusan diirada saari jirin tababarka, taasoo sababtay in ugu dambeyntii uu ka tago kooxda ku ciyaarta garoonka Santiago Bernabeu.
Antonio Cassano ayaa yimid kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kaddib markii uu kaga soo biiray naadiba AS Roma, kahor inta uusan markale dib ugu soo laabanin Talyaaniga, wuxuuna xirtay maaliyadaha kooxo ay ugu muhiim sanaayeen Inter iyo AC Milan.
Haddaba wargeyska “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Antonio Cassano waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxa ugu weyn ee aan ka qoomameynayo ayaa ah inaan ka tagay Real Madrid, waxaan joogay kooxdii ugu fiicneyd taariikhda, waxaana awooday inaan sii joogo mudo dheer oo aan kula guuleysan karay koobab badan”.
“Waxaan raacay wadadeyda, qaladaad badan ayaana galay, waan tagay, habdhaqanka aad ayuu u xumaa, waan u qalmay in la idilo, maxaayeelay waxay aheyd dhaqan aan loo dul qaadan karin”.
Xiddiga reer Talyaani ayaa dhibaatooyin badan ka abuuray qolalka labiska ee kooxo badan oo uu ka ciyaaray, waxaana inta badan lagu yiqiinay qiiro, xanaaq iyo diidmo la yaab leh ee uu galin jiray garsoorayaasha, isagoo inta uu iska siibo maaliyada isla markaana ooyi jiray, taasoo si weyn hoos ugu dhigtay guulaha uu ka gaaray mustaqbalkiisa kubadda cagta, inkasta oo uu leeyahay karti u gaar ah.”
SHAX laga sameeyay 11-kii xiddig ee ugu xumaa taariikhda oo soo maray kooxda Real Madrid!
Ciyaaryahan ka tirsanaa Kooxda Real Madrid oo jilaa noqday iyo Filim xiiso leh oo uu la yimid!